Home Wararka Qaar ka mida Madaxda Carabeed oo hambalyo u diray Netanyahu
Qaar ka mida Madaxda Carabeed oo hambalyo u diray Netanyahu
Ra’isul wasaaraha Isreal Benyamin Netanyahu oo toddobaadkii hore ku guulasytay doorashadii wadankaasi ka dhacday ayaa sheegtay in madax tiro badan oo carabi ah ay isugu hambalyeeyeen guusha uu gaaray.
Madaxweynaha Israeli Reuven Rivlin ayaa maanta la filayaa inuu ka codsado Benyamin Netanyaho inuu soo dhiso xukuumada cusub, kadib markii si rasmi ah loogu dhawaaqay natiijadii doorashadii Isreal Ka dhacday.
Xisbiga garabka Midig ee Likud ee Ra’isul wasaaraha ayaa ku guulaystay 35 Kursi, halka xisbiga ka soo horjeeda ee uu hoggaamiyo Generaal hore oo ka tirsanaa ciidamada oo lagu magacaabo Benny Gantz. Barlamaanka ayaa ka kooban 120 Kursi
” Dhamaan shacabka Isreal, Yuhuuda iyo dadka aan yuhuuda ahayn, waxaan ka dalbanayaa inay ka qayb ka noqdaan guusha weyn ee wadanka Isreal gaaray, waxaan noqonayaa Ra’isul wasaaraha qofkasta” sidaas waxaa yiri Netanyaho
Wuxuu sheegay in guushiisii ay ugu soo halbalyeeyeen madax badan oo caalamka ah, oo ay ku jiraan madaxda wadamada Islaamka iyo carabta, kuwasoo oo uusan xusin.
Previous articleIn exile, Somali official fired for pro-Israel views demands an apology
Next articleMadaxda Dowlad Goboleedyada oo markale dhagaha ka fureeystay codsigii Farmaajo kuna shiraya Nairobi
“Hal jaban geeleeda ayay boqol ku tahay” Farriin loo diray Cabdikarin Xusen Guled (Qormo)
Gudoomiye Mursal oo xafladii xalay albaabada laga soo xirtay! Maxaa soo kordhay?
Kheyre oo $800,000 ku wareejiyay Al Sunna iyo lacag dheeraad ah oo maanta laga soo saaray qasnada Gobolka Banaadir
Reporter - June 26, 2019
The area in the Kenya-Somalia maritime border dispute forms a triangle east of the Kenya coast. The hearing of the maritime dispute between Kenya...
Somalia, Kenya maritime case hearing starts in September
English June 26, 2019
President Farmaajo rejects Nairobi venue for Somalia Somaliland talks
Rethink needed in Kenya’s war on terror
English June 25, 2019
Somaliland authorities imposes ban on Somali National TV
Wararka June 27, 2019
Wararka June 26, 2019
RW Kheyre oo raba in Saadaq John uu sugo amniga Doorashada Galmudug (Xog)
Kheyre: “Beesha Habargedir iyada isma rabto, dalna kama maqno, qofkastaana waxa uu isku arkaa in uu yahay boqor”
error: Nabad & Nolol
Ciidanka Dowlada oo rasaas ku furay dad mudaharaadayo iyo dhowr qof oo ku dhimatay
Wararka April 18, 2019
Maxkamada Caalamiga (ICJ) oo shaacisay waqtiga la dhagaysanayo dacwada Kenya iyo Soomaliya (Aqriso)
Wararka June 25, 2019